CHE mezuru IATF 16949: asambodo 2016
Anyi na-amuta usoro njikwa emeputa ihe di elu, na-ewebata ngwa oru ndi na emeputa ihe ma mekwaa ka omumu nke ndi anyi di elu, na-akwalite asọmpi nke ulo oru mgbe niile, na-eme ka ndi ahia anyi n’enweghi nchekari n’ahoro hoputara anyi.
Afọ Ọhụrụ (China: Xiaonian)
Afọ Ọhụrụ (China: Xiaonian), ọ na - abụkarị otu izu tupu ọnwa Ọhụụ, na-ada na Jenụwarị 17 afọ a. A na - akpọkwa ya Ememe Ahịrị Ahịrị, Chi nke na - ahụ maka ịkpa ezi agwa ezinaụlọ ọ bụla.
Otu na-ewu ụlọ
Mmetụta ike nke ndị otu njem na Qingyuan
Ngwaọrụ & Akụrụngwa Akụrụngwa Expo Tokyo 2020
Igwe anaghị agba nchara & akụkụ
Igwe anaghị agba nchara bụ ihe dị mma maka iguzogide corrosion, imechi ihe, ma na-enye ndozi na ntinye nke otutu maka ngwa. A na-akpụzi igwe anaghị agba nchara, akwa, mpempe akwụkwọ, paịlị, waya na ọkpọkọ n'ụdị ọ bụla. Offọdụ ụlọ ọrụ na-eji igwe anaghị agba nchara bụ ụlọ, ahụike, mmiri, ụgbọ ala na akụrụngwa nke ụlọ ọrụ. Enwere ike iji akara igwe anaghị agba nchara, gbanye ya akpụ, machined na isi isi.
19-21 Mach 2019 Guzosie A07, 1lọ Nzukọ 2019 Halllọ oriri na nkwari maka ụlọ ala Fastener Fair Stuttgart XNUMX Chuanghe Fastener Co., Ltd a ga-enwe ndị ahịa ngwaike ọkachamara iji gosipụta gị ngwaahịa anyị, mgbanwe ihu na ihu iji nye ọrụ dị mma.